Myanmar’s foreign policy towards China 1988-2012: To what extent has Myanmar’s foreign policy towards China been determined by global geopolitical concerns in the period 1988-2012? - ISP Myanmar China Desk
Myanmar’s foreign policy towards China 1988-2012: To what extent has Myanmar’s foreign policy towards China been determined by global geopolitical concerns in the period 1988-2012?
စာတမ်းခေါင်းစဉ် – Myanmar’s foreign policy towards China 1988-2012: To what extent has Myanmar’s foreign policy towards China been determined by global geopolitical concerns in the period 1988-2012?
ရေးသားသူ – Amanda Fang
ထုတ်ဝေသည့်အဖွဲ့ – The Harvard Undergraduate Research Journal
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် – ၂၀၁၅
စာတမ်းအပြည့်အစုံ – Myanmar’s foreign policy towards China 1988-2012: To what extent has Myanmar’s foreign policy towards China been determined by global geopolitical concerns in the period 1988-2012?
ယခုစာတမ်းတွင် ၁၉၈၈-၂၀၁၂ အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမှာ ပထဝီနိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအပေါ် အခြေခံပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်သလားဟူ၍ မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။
ပထမဦးစွာ ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုများမပြုမီ ၁၉၈၈-၂၀၁၂ ကာလအတွင်း တရုတ်-မြန်မာ သံတမန်ဆက်ဆံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ အဓိကဆွေးနွေးချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒသည် နိုင်ငံတကာပထဝီနိုင်ငံရေးကို အလေးထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် မိမိ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို အမေရိကန်နှင့် တရုတ်တို့ လွှမ်းမိုးသော နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးစနှစ်အတွင်း ထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ထိုစဉ်းစားချက်မျိုးအရ ၁၉၉၀ နှစ်များမှ ၂၁-ရာစု အစပိုင်းများအထိ မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နှင့် ပိုမိုရင်းနှီးစွာဆက်ဆံရေးမူဝါဒကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ယင်းနောက် တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် မှီခိုနေရမှုတွင် စိုးရိမ်ပူပန်ဖွယ်ရာများရှိလာခြင်းများကြောင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကို ဖြေလျော့နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလာခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။
အထက်ပါသုံးသပ်ချက်များသည် အတိုင်းအတာတခုအထိ မှန်နိုင်သော်လည်း ဤစာတမ်းတွင် ကောက်ချက်ချထားသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ထားရှိသော မူဝါဒကို နားလည်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအပေါ် မြန်မာအစိုးရ၏ ချဉ်းကပ်ပုံများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးကို လျစ်လျူရှုပြီး ပထဝီနိုင်ငံရေးကိုသာ စဉ်းစားလျှင် မှားယွင်းနိုင်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးရာများသည် ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာအပြုအမူအများအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမှာ အရှေ့အာရှ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ နားလည်မှု အားနည်းသွားစေနိုင်သည်။
စာတမ်း၏ တတိယနှင့် နောက်ဆုံးအပိုင်းတွင် ပြည်တွင်းရေးရာ အခြေအနေများကို လေ့လာသုံးသပ်ရာ၌ တရုတ်နှင့် ပတ်သက်သည့် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ချမှတ်ရာတွင် ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ စဉ်းစားချက်သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာရှိပြီး ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးစဉ်းစားချက်များကသာ ပိုမိုအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်လျက်ရှိသည်ကို တင်ပြထားသည်။ ယခုစာတမ်းကို ပြုစုရာတွင် တစ်ဆင့်ခံ စာအုပ်၊ စာတမ်းများသာမက တရုတ်-မြန်မာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အီလစ်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများကို ၂၀၁၂ခု နှစ်၊ သြဂုတ်လက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူတွေ့မေးမြန်းချက်များအပေါ် အခြေခံထားပါသည်။
Categories: Geopolitics Foreign policy
China-Myanmar Relations Since Naypyidaw’s Political Transition: How Beijing Can Balance Short-Term Interests And Long-Term Values
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အရပ်သားပုံပြောင်းတပ်မတော်အစိုးရကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ဆောင်ရွက်မှုများအကြောင်း ဆွေးနွေးရာတွင် လေ့လာသုံးသပ်သူအများစုသည် ဘေဂျင်းနှင့် Read more...